Fitsaboana momba ny fianarana MCSE vokatra - ITS Tech School
Ny manam-pahaizana IT dia tsy maintsy manana ny zavatra tsara sy fampahalalana tsara mba hanamafisana sy hifehezana ny karazan-javatra izay manome hery ny mpanjifa farany hitarika asa. Ny mari-pankasitrahana MCSE Productivity dia manome ny jeneraly IT ny fahafahana hanamafy karazana fahaiza-manao izay fantatra amin'ny sasany amin'ireo endriny indrindra amin'ny Microsoft, anisan'izany ny SharePoint, Skype for Business, ary Exchange Server. Amin'ny ankapobeny, ny fanamafisana ny fahaizan'ny MCSE Productivity dia manatsara ireo mpianatra amin'ny toerana misy azy, ohatra ny filohan'ny zokiolona, ​​ny mpanara-maso ny IT, ny mpiandraikitra ny rafitra, ny manam-pahaizana ambony indrindra amin'ny sehatra, ary izany no fiandohana.
Fijerena ny fifantohana
Ny fanamafisana ny vokatra momba ny vokatra amin'ny Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) dia manamarina fa ny mpianatra dia manana ny zavatra andrasana handefasana ireo fikambanana amin'ny rahona, hampitombo ny fidiram-bolan'ny mpampiasa sy ny fampandrosoana, hampihenana ny tsy fahampiana vaovao, ary hampiroborobo ny filaminan'ny filazam-baovao. Ny MCSE: Ny fahaiza-mamokatra, mitovy amin'ireo mari-pahaizana maoderina rehetra eo ambanin'ny rafitra fanamafisana vaovao an'ny Microsoft, dia manome fahafahana ny mpianatra hijery ny dobo fanadinana amin'ny fanamafisana ny fanamafisana ny filàn'izy ireo.
Mba hahazoana mahafeno fepetra ho an'ny MCSE: Accreditation productivity, ny mpianatra dia tokony hahazo ny MCSA ihany koa: Office 365 na MCSA: Fanamafisana ny Windows Server 2012 ho tena ilaina. Raha te hahazo ny mari-pahaizana ilaina izy ireo dia tsy maintsy maka fanadinana fanampiny ny mpianatra mba hikarakarana ny MCSE: Fanamafisana ny vokatra.
Ny MCSE: Ny dobo fanadinana vokatra dia ahitana fanadinana valo, ny sasany amin'izy ireo dia azo antoka amin'ny fanomanana CBT Nuggets.
Fametrahana sy fametrahana Microsoft Exchange Server 2016 (70-345)
Ny fisokafan'ny Microsoft SharePoint Server 2016 (70-339)
Fametrahana fepetran'ny orinasa mampiasa Skype ho an'ny Business 2015 (70-333)
Solontenan'ny votoatin'ny Microsoft Skype amin'ny Business 2015 (70-334)
Ireo vahaolana fototra amin'ny Microsoft SharePoint Server 2013 (70-331)
Solontenan'ny Microsoft SharePoint Server 2013 (70-332)
Ny vahaolana fototra amin'ny Microsoft Exchange Server 2013 (70-341)
Solontenan'ny Advanced Exchange ao amin'ny Microsoft Exchange Server 2013 (70-342)
Ny MCSE: Fanamafisana ny famokarana vokatra, noketrehin'ny 2016 ho solon'ny MCSE: SharePoint, MCSE: Communication, ary MCSE: Accreditation Messaging, izay nametra-pialana tamin'ny March 31, 2017.
Raha ny tokony ho izy dia tokony hanana telo (3) na traikefa an-taonany maro ny mpandraharaha mikarakara ny mari-pahaizana manokana, indrindra ny Office 365 na Windows Server 2012 (na 2016).
Ny singa mifototra miaraka aminy dia mifandraika amin'ny fanadinana rehetra ao amin'ny dobo hafa izay mamorona ny MCSE: Accreditation amin'ny famokarana.
Fotoana voatondro ho an'ny fanadinana: 2 ora (120 minitra) isaky ny fanadinana
Fomba fangatahana: 40-60 * ho an'ny fanadinana tsirairay
Dingana mahomby: 700 ** ho an'ny fanadinana tsirairay
Karazana adiresy: fanapahan-kevitra marobe; fanapahan-kevitra isan-karazany / valiny maro; zava-misy
Fanolorana fanolorana: Microsoft Learning na Pearson Vue
Tena mety tsara izany raha mahamarika an'io MCSE io: Ny fanadinana fidirana amin'ny fidirana an-tsarimihetsika dia mety ho azo atao amin'ny serivisy nomena an-tserasera.
Ny vidin'ny Exam: $ 165 (USD) isaky ny fanadinana
Votoatiny: Ny pejy fanoratana fanadinana rehetra ao amin'ny tranonkala Microsoft dia manome ny ampahany amin'ny Skills Measured (tombony maimaimpoana) mba hifehezana ny fijerinao sy ny fahavononanao.
* Ny Microsoft dia tsy mizara ny fanamarinana marina mifandraika amin'ny fanadinana azy. Araka izany, ny habetsaky ny fanontanian'ny mpianatra dia hahita ny fahasamihafana eo amin'ny sehatry ny raharaha.
** Satria ny fahasamihafan'ny fanontaniana dia tsy tena marina fa ny mpianatra dia tokony handresy 70 isan-jato fototra mba handalinana ny fanadinana.
Ny fanadinana Microsoft dia malaza amin'ny fanandramana. Mpianatra maro no mahita fa mila maka fanadinana mihoatra ny indray mandeha izy ireo mba hahatanteraka vokatra mahomby. Soa ihany fa fantatr'i Microsoft ny haavon'ny fitsapana mifandraika amin'ny fanadinana azy ireo, ary manome fanatanjahan-tena miverimberina matetika izy ireo, ahafahan'ny mpianatra mamerina fanadinana amin'ny vola madinika. Raha tsy be loatra ny olana dia diniho fa tsy mety ho azo atao ny fanaraha-maso ny fanandramana. Amin'ity daty famaranana ity, ny fanadinana rehetra mifandraika amin'ny MCSE: Ny vokatra dia mampiditra fanandramana fanadinana, na izany aza dia mety hiova izany. Ny mpikaroka dia tokony hikaroka ny Fanandramana ny Fanandramana ny Fanandramana mba tsy hifanaraka amin'ny fahafahana miditra amin'ny varavarana misokatra.
Ny Microsoft accreditation ny MCSE dia ara-dalàna mandritra ny fotoana lava. Araka ny voalazan'ny Microsoft, ireo fanadinana fanavaozana ireo dia azo jerena amin'izao fotoana izao ho an'ny filoha MCSE sy MCSD ho an'ny laza. Ny fanadinana fanavaozana dia manazava ny loha-hevitra avy amin'ireo fanadinana noraisina mba hikarakarana voalohany ny fahaiza-manao, miaraka amin'ny fifehezana manokana momba ny fanavaozana farany sy ny fanovana. Amin'ny alalan'ilay rafitra fanadinana vaovao mifantoka amin'ny fanabeazana, ny mpianatra dia manana fahafahana haka fanadinana fakan-kevitra momba ny fisafidianana azy isan-taona mba "hamerenana indray" ny fanamafisana.
Ny dingana manaraka
Ny MCSE: Fahombiazana ny fahaiza-mamorona, na dia toy ny mpivarotra aza ny mari-pahaizana manokana, ny mpianatra dia afaka manitatra ny fiverenany na manararaotra bebe kokoa amin'ny fanambarana fanampiny Microsoft toy ny dingana manaraka.
Anatin'ny Universe Microsoft, ny MCSE: Ny vokatra dia miorina amin'ny fametrahana ny MCSA: Windows Server 2012 sy ny MCSA: Accreditations Office 365, manome ny mpianatra ny safidy sasantsasany mifandraika amin'izany:
MCSA: Office 365 (misy fanadinana roa: 70-346 sy 70-347)
MCSA: Windows Server 2012 (misy fanadinana telo: 70-410, 70-411, ary 70-412)
MCSA: Windows Server 2016 (misy fanadinana telo: 70-740, 70-741, ary 70-742)
MCSA: Windows 10 (misy fanadinana roa: 70-697 sy 70-698)
MCSE: Famokarana (mijery ireo fahaizana manokana: Exchange Server 2016 na 2013, SharePoint Server 2016 na 2013, na Skype for Business)
MCSE: Cloud Platform sy Infrastructure (mijery ireo fahaizana manokana: Azure, Cloud Data Platform, Big Data Analytics, Windows Server 2016, Server Infrastructure, na Private Cloud)
MCSD: App Builder (mijery ireo fahaizana manokana: Azure, Universal Windows Platform, SharePoint 2013, na Visual Studio)
Mpianatra izay mahazo ny MCSE: Ny fanamafisana ny fahazoana vokatra dia matetika ny sysadmins, ary amin'ny maha-talen'ny rafitra azy dia betsaka ny fotoana takiana amin'ny fampahalalana sy ny fahaiza-manao fantatra amin'ny fanavaozana loharanom-baovao sy virtoaly. Noho izany, matetika ny mpianatra no mandinika ivelan'ny tontolon'ny Microsoft:
CompTIA Linux + sy LPI LPIC-1 (misy fanadinana roa: LX0-103 sy LX0-104)
VMware vSphere 6 fototra (iray monja amin'ny fanadinana: vSphere 6 fototra 2V0-620)
LPI LPIC-2 (misy fanadinana roa: 201-400 sy 202-400)
VMware vSphere 6 VCP6-DCV (misy iray monja: VCP6-DCV)
Ny Payscale.com dia manome boky fianarana ho an'ny fanonerana ho an'ny mpampianatra izay manapa-kevitra ireo mpianatra hanapa-kevitra ny mizana karama tsara amin'ny fanokafana asa mifandraika amin'ny mari-pahaizana MCSE. Payscale.com dia mitatitra momba ny fanonerana ny $ 50,075 sy $ 144,966 ho an'ny kintana IT izay mihazona ny fidirana MCSE, anisan'izany ny MCSE: Productivity. Ny ampahany izay mahazatra ho an'ireo izay mihazona ny fanamafisana ny MCSE dia mampiditra ny mpiandraikitra ny IT, ny lehiben'ny IT, ny mpitantana ny rafitra, ary ny rafitra ambony.
Ny fanomezam-pahefan'ny Microsoft dia napetraka ho toy ny piramida, miaraka amin'ny ambaratonga isan-tsoratra amin'ny fanamafisana ny mpianatra ho mpamaky amin'ny fanambarana avo lenta kokoa, be pitsiny sy sarotra. Ao amin'ny fototry ny Microsoft piramida, manamafy ny fametrahana ny fianarana amin'ny MTA (Microsoft Technology Associate) ny manam-pahaizana IT. Ity manaraka ity dia ny MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) sy ny MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer), izay mampiavaka betsaka ny fanamafisana faran'izay manan-danja indrindra amin'ireo manam-pahaizana IT izay atolotr'i Microsoft, anisan'izany ny Server 2012, Office 365, ary Azure. Farany, ny MCSE (Microsoft Certified Solution Expert) dia miresaka amin'ny ankapobeny tsy dia mazava loatra ny fanomezan-dàlana nomen'i Microsoft ary manome ny mpianatra ny fahafahana mamorona sehatra mifandraika amin'ny voka-tsoan'ny MCSA.
Araka ny fijerin'i Microsoft, ny MCSE sy ny MCCR: MCSE: Cloud Platform sy Infrastructure, MCSE: Mobility, MCSE: Data Management sy Analytics, MCSE: Productivity, ary MCSD: AppBuilder) dia ampifandraisina amin'ny Centers of Excellence, ampiasaina amin'ny Microsoft Ny Network Network dia manavaka ireo fahaiza-manao manokana izay tsy dia mendri-pihetseham-po tanteraka amin'ny mpiray tampo sy ny mpanjifa Microsoft. Ireo mari-pankasitrahana ireo dia tsy manana fepetra famerenana miverimberina. Ny daty nahaterahany kosa dia manamarika ny fomba ahafantaranao ny fiovan'ny fanavaozana.
Isan-taona dia manana fahafahana hanarina ny mari-pahaizana ianao amin'ny alalan'ny famerenana fanadinana avy amin'ny ambadiky ny fifidianana, mampiseho ny fahaliananao amin'ny fampitomboana na fanitarana ny fahaiza-manaonao ao amin'ny Foibe manam-pahaizana. Isaky ny mahazo ny mari-pankasitrahana ianao dia misy ampahany fanamafisana hafa ampidirina ao amin'ny rakitsoranao. Io fomba fanao io dia manolo ny fepetra ilaina amin'ny famerenana indray ny fepetra fanavaozana manokana amin'ny fomba ofisialy matetika (MCSD) na toy ny famantaranandro (MCSE) mba hitazonana ny fankatoavana anao tsy hiditra. Mitadiava bebe kokoa momba ny rafitra fanamafisana ny Microsoft vaovao.
Hanombohana ny fanadihadiana hafa amin'ny fanomanana sy fanamafisana Microsoft hafa mba hanokafana fiakarana bebe kokoa amin'ny fanatsarana.
Ny MCSE: Ny fanamafisana ny vokatra eo amin'ny vokatra dia mampiseho ny fahaiza-manaonao sy ny fahatsapanao ny andraikitra momba ny fianarana tsy tapaka miaraka amin'ny karazana Microsoft fandrosoana, anisan'izany ireo singa be loatra, ohatra ny Exchange Server, Skype for Business, ary SharePoint. Ity fanamafisana ity dia manaporofo ny fahamarinanao sy ny fahaizanao amin'ny fanaraha-maso ny singa fototra momba ny tontolo iainana. Ny MCSE anao: Ny fanamafisana ny vokatrao dia ahafahana manokatra varavarana misokatra ho an'ny varavarana misokatra rehefa miezaka hanome fahafaham-po ny tanjonao.